Njengoba wazi, amaprotheni carbohydrate ukudla kungukuthi Kunconywa ukuba kusetshenziswe kanyekanye. Abanye ochwepheshe ngisho ukubiza le nhlanganisela "ukudla ushevu". Kodwa zonke umthetho ine ngaphandle, futhi kufanele ngakho. Ngakho, imikhiqizo eyenziwe kusukela durum ukolo, kanye nemifino enhle kakhulu Duet wezokudla. Mhlawumbe yingakho emazweni amaningi aseYurophu athandwa kakhulu, ngokwesibonelo, i-pasta kanye isitshalo seqanda nezinye imifino okunesitashi. Ukupheka lezi ukudla kulula. Ngokwesibonelo, cabangela ezinye izinketho kuhle ezithakazelisayo.
Yidla imifino - hhayi kuphela esiphundu kodwa futhi ewusizo kakhulu. Landela lo mthetho ngokuvamile imifino. Kubo, pasta ne isitshalo seqanda kuyoba dinner okugcwele wangempela "iholide isisu." Ukuze silungiselele lokhu dish udinga:
1 isitshalo seqanda, 250 g pasta, usawoti, 2 u-anyanisi, 4 ugarliki, ikhumini kancane, uwoyela Basil (yemifino kanye ukhilimu) kanye emnyama.
Pheka pasta ne isitshalo seqanda ulula. Yonke inqubo unezigaba eziningana:
Okokuqala, udinga uthele epanini 2 amalitha amanzi awubeka umlilo.
Ngalesi sikhathi, ungakwazi ngokuphepha ngiqale ukulungiselela imifino. Ngenxa yale njongo kubalulekile ezinqumela usike isitshalo seqanda kanye ngokucophelela ubuse anyanisi.
Podsolit amanzi cishe abilayo, pasta uyiphonse futhi wenze ilangabi ezincane. Ukuze ukupheka, kuthatha okungenani angu-10. Okuningi isikhathi esinembile eboniswa ku iphakethe.
On a Skillet esishisayo emafutheni esishisayo Fry imifino oqoshiwe.
Bese wengeza i-isitshalo seqanda bese uqhubeke ngenqubo baze ithambe.
Kusukela pan abakhwabanisi, kusale ezansi cishe 3 wezipuni.
Engeza basil, ibhotela, futhi ushiye okuqukethwe lid imizuzu embalwa.
Ngemva kwalokhu izoxhumanisa kuphela kokubili semi eseqedile ndawonye.
pasta okunjalo nge isitshalo seqanda kungcono ukusebenzisa ashisayo. Ngo abandayo lokhu dish ngeke kube umphumela oyifunayo.
esihlwabusayo kakhulu wathola pasta ne isitshalo seqanda notamatisi. Budebuduze lezi imifino ezimbili kwenza isidlo elimnandi ngaphezulu. Ukuze usebenze kungadingeka:
2 isitshalo seqanda, onion, 0.5 khilogremu utamatisi, isipuni ushukela, 3 ugarliki, Basil ugongolo fresh, usawoti, 2 wezipuni iwayini uviniga, 400 amagremu pasta (spaghetti), umhlabathi emnyama, amafutha yemifino kanye ushizi othambile kancane.
pasta Made nge isitshalo seqanda notamatisi futhi silula:
Okokuqala, kubalulekile ukugeza aubergines bese uthathe cubes, pre-ukuncishiselwa kusuka bo khumba.
Khona-ke udinga ukukhanyisa utamatisi e puree. Kungcono ukusebenzisa blender. Ngaphambi kwalokhu, ne utamatisi, susa ikhasi, yithela them ngamanzi abilayo.
Isinyathelo sokuqala pan kufanele kube kancane Fry anyanisi oqotshiwe.
Engeza isitshalo seqanda kanye ulinde amaminithi 3 aze kuphekeke.
Ecubuziwe amazambane ku pan upheke ukudla ngaphansi lid imizuzu 10.
Engeza izithako asele bese kancane ndawonye.
Phakathi nalesi sikhathi, udinga ukuba nithele spaghetti.
Ekugcineni, udinga nje uhlanganise imikhiqizo. Uma wayefisa, engeza amaqatha ambalwa ushizi othambile. Nakuba lokhu kungadingeki.
Ukuze wenze i-pasta okunomsoco ne-eggplant, iresiphi kufanele eyayihambisana yini eminye imikhiqizo inyama. Ngenxa yalesi isidlo kungase kudingeke izithako ezilandelayo:
1 isitshalo seqanda 300 amagremu of inyama nengulube pasta, 2 clove sikagalikhi, onion, usawoti, 4 wezipuni utamatisi sauce, umbhangqwana amahlumela ngesikele sokuthena basil, pepper kanye ingcosana 5 cherry utamatisi.
Njengoba yenziwe isidlo efanayo:
Okokuqala, kubalulekile ukuba nithele pasta esimweni uhhafu kuphekwe (al dente), bese engahashazanga, wamshaya colander.
Ngo amafutha hot Fry onion kuze kuba cishe okusobala.
Engeza nesweli oqoshiwe, futhi emva kwemizuzu 1-2 zibe ukugxusha pan.
Endaweni ehlukile, Fry isitshalo seqanda.
Bangeze yenkomo cishe eseqedile, ayoliswe ngosawoti, pepper kanye utamatisi unama. Ingxube bakhishwe imizuzu 10 on ukushisa low.
Manje ungakwazi ukubeka basil notamatisi, uthathe 4 izicucu.
Okungenani ukwengeza pasta abilisiwe ugovuze kahle.
Ngemuva kwemizuzu engu-3-5 umlilo kuyoba off. Ready-ukudla wakhonza etafuleni esishisayo.
Pheka pasta ne imifino bengayi kuphela plate. Wale mikhiqizo kungabuye walungisa okuningi izitsha ezithakazelisayo kuhhavini. Ngokwesibonelo, esihlwabusayo kakhulu etholwe Casserole pasta ne isitshalo seqanda. Ukuze ekuwulungiseleleni edingekayo isethi ocebile imikhiqizo:
250 amagremu of pasta, 2 pepper ezinoshukela, 3 wezipuni amafutha omnqumo, 400 amagremu of isitshalo seqanda, amaqanda 2, 200 amagremu cream ze-non-fat cottage shizi, umhlabathi emnyama, 150 amagremu ukhilimu noshizi, kanye 2 wezipuni breadcrumbs nengulube imifino fresh.
Ukulungiselela iqala ukucutshungulwa casseroles yemifino:
Isitshalo seqanda kufanele wageza bese uthathe tincetu, ukushuba zazo kufanele kube kungekho kuka 1 isentimitha.
Pepper, aba nguhhafu, singabi imbewu.
Imifino walala bhaka, inkathi ngosawoti ufafaze amafutha, wafaka kuhhavini. Temperature therein kufanele kube 180 degrees. Ngemuva kwemizuzu engu-5, izingcezu kungacinywa. Futhi ngokushesha nje lapho imikhiqizo kuthiwa ezibomvana, bakwazi ukuthola.
thumba Macaroni emanzini anosawoti, bese uxubha kahle.
Amaqanda lokuqala exutshwe ukhilimu, cottage shizi no ukhilimu omuncu, bese ufaka imifino noshizi. Ngemva kwalokho, ingxube kufanele kahle uphehle.
On eligcotshisiwekuhovini baking sheet babeka pasta kuqala. Khona-ke amboze zabo Iqanda-cream ushizi mass. Isendlalelo sokugcina kuyoba imifino.
Sonke lesi sakhiwo kumele abafafazwe breadcrumbs, uthele amafutha bese efakwa kuhhavini imizuzu 35 at 180 degrees.
Ukuze kulungiswe Casserole elimnandi kuthatha ingqikithi hhayi isikhathi esingaphezu kwehora. Ngokwe-ukupheka, isidlo kuvela ezihlwabusayo kakhulu nokunomsoco ngokwanele ukuba bakhonze njengezithunywa ngokudla kwasekuseni okumnandi noma dinner egcwele.
Indlela yokwenza Wand magic "Maynkraft" futhi kanjani ukuyisebenzisa?
Amazon lily - euharis. Uyabakhathalela ekhaya
Surveyor - ngubani? Ake sibone